बढाउनुहोस्: परम इन्टरनेट मार्केटिंग ड्यासबोर्ड निर्माण गर्नुहोस् Martech Zone
हामी दृश्य प्रदर्शन सूचकका ठूला प्रशंसकहरू हौं। हाल, हामी हाम्रो ग्राहकहरु मा मासिक कार्यकारी रिपोर्ट स्वचालित र हाम्रो कार्यालय भित्र, हामी एक ठूलो पर्दा छ कि हाम्रो सबै ग्राहकहरु को एक वास्तविक समय ड्यासबोर्ड प्रदर्शित गर्दछ ईन्टरनेट मार्केटिंग कुञ्जी प्रदर्शन सूचकहरु। यो एक उत्तम उपकरण भएको छ - सँधै हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि कुन ग्राहकहरूले राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्दै छन् र कुन सुधारको लागि अवसर छ।
जब हामी हाल प्रयोग गर्छौं गेकोबोर्ड, हामी चलाइरहेका छौं केहि सीमितताहरू छन् जुन हामी ड्यासबोर्डलाई फाइन-ट्यून गर्न, यसलाई अनुकूलन गर्न, र ग्राहकहरू थप्न जारी राख्छौं। Geckoboard विजेटहरूको एक ठूलो चयन छ कि ड्यासबोर्डमा थप्न र व्यवस्थित गर्न सरल छन्। जे होस्, ती धेरै अनुकूलन योग्य छैनन् - सीमित, कडकोड विकल्पहरूको साथ।
बढ्दै धेरै सुविधाहरू सहित एक पूर्ण अनुकूलन योग्य ड्यासबोर्ड प्रदान गर्दछ:
आकार - प्रत्येक विजेट सरल आयाम बाहिर साइज गर्न सकिन्छ।
ओवरले प्रत्येक विजेटमा स्वतन्त्र स्रोतको सट्टामा तपाई बहु डेटा स्रोतहरू ओभरले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए वेबसाइट सशुल्क ट्राफिकको शीर्षमा रूपान्तरण र राजस्व ओभरल्यान्ड गर्नुहोस् कल्पना गर्नुहोस्!
डेटा स्रोतहरू - यदि क्यान विजेट पर्याप्त छैन भने, तपाईं पनि आफ्नो डाटा स्रोतहरू थप्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि अनलाइन डाटा स्रोतमा जडान गरेर र ग्रोको विजेटहरूको प्रयोग गरेर आउटपुट चार्टि by गरेर।
हामी अनुकूलन विकास गर्न केहि गम्भीर सोच दिइरहेका छौं इन्टरनेट मार्केटिंग ड्यासबोर्डहरू हाम्रो प्रत्येक ग्राहकको लागि र त्यसपछि हाम्रो रिपोर्टिंग पूर्ण रूपमा दूर गर्दै। जबकि यो संक्रमण को लागी हामीलाई केहि काम चाहिन्छ, वास्तव मा हाम्रो ग्राहकहरु लाई यो दिशा मा सार्न मा समग्र लागत बचत हुनेछ। र रिपोर्ट गर्नको लागि कुनै आवाश्यक छैन - अब हामीसँग वास्तविक डाटामा सबै डाटा हुनेछ।
ग्रो प्रतिनिधिसँगको हाम्रो कुराकानीमा उनीहरूसँग सतर्कताहरू चाँडै प्लेटफर्ममा आउन सक्छ। हाम्रो संक्रमण संग एक दिमागमा रहनेछ। यातायात मा एक स्पाइक वा लीड्स मा एक ड्रप मा सूचित भइरहेको कल्पना गर्नुहोस्!
बढ्दै तपाईको डेटा पहुँच गर्न र वास्तविक-समय स्कोरबोर्डमा भिजुअलाइ गर्ने यो सरल तरिका हो। जब व्यापारको प्रदर्शन मापन गरिन्छ यो सुधार गर्न सकिन्छ। र टोलीहरू जसले स्कोर जान्दछन्, जित्नको लागि खेल्नुहोस्!
वर्तमान एकीकरणमा ऐक्ट-अन, अमेजन रेडशिफ्ट, अमेजन एस,, मूल्यांकन, आसन, बक्स, CSV, कस्टम रेस्ट एपीआई, च्यानल सल्लाहकार, डाटाबेस कनेक्टर, ड्रपबक्स, फेसबुक, फेसबुक विज्ञापन, फ्रेशबुक, एफटीपी / एसएफटीपी फाइल पहुँच, गिथब, गुगल ऐडवर्ड्स , Google एनालिटिक्स, गुगल स्प्रिडशिटहरू, फसल, एचपी वर्टिका, इन्फुसियंसोफ्ट, इनसाइडल्स डॉट, इन्स्टाग्राम, म्यागेन्टो, मेलचिम, मार्केटो, मिक्सपनेल, मोंगोडीबी, माइस्क्ल, नेट्सवाइट, नुओडीबी, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, क्विकबुकहरू अनलाइन, शॉपिफाई, शिपस्टेसन, सेल्सफोर्स, सर्भर, चिनी सीआरएम, टीम वर्क, ट्विटर, भर्टिका डाटाबेस, शून्य, यूट्यूब, जोहो बुक्स, जोहो सीआरएम, अमेजन विक्रेता केन्द्रीय, अमेजन S3, Hubspot, पुनरावृत्ति, र IQ सम्बन्धित। माइक्रोसफ्ट डायनेमिक्स सीआरएम चाँडै आउँदैछ।
टैग: ऐन अनअमेजन रेडशिफ्टअमेजन एस।अमेजन विक्रेता केन्द्रीयमूल्याङ्कनasanaपेटीच्यानल सल्लाहकारCSVकस्टम रेस्ट एपीआईड्यासबोर्डमाड्यासबोर्ड अनुप्रयोगड्यासबोर्ड प्लेटफर्मडाटाबेस कनेक्टरड्रपबक्सफेसबुकफेसबुक विज्ञापनहरूताजा किताबहरूFTP / SFTP फाईल पहुँचGitHubgoogle adwordsGoogle विश्लेषणगुगल स्प्रिडशिटहरूबढ्दैकटनीएचपी भर्टिकाहबस्पटInfusionsoftinsidesales.comइन्स्टाग्रामकुञ्जी प्रदर्शन संकेतकहरूmagentomailchimpमार्केटिंग ड्यासबोर्डमार्केटिंग ड्यासबोर्ड अनुप्रयोगमार्केटोMixpanelMongoDBMySQLनेट सूटनुओडीबीबजेटPostgreSQLक्विकबुकहरू अनलाइनबारम्बारसम्बन्धित IQबिक्री बलशिपस्टेशनशॉपिफाईSQL सर्भरचिनी सीआरएमटोली कार्यtwitterभर्टिका डाटाबेसएक्सेरोYouTubeZoho पुस्तकहरुZoho CRM
सेप्टेम्बर 13, 2016 बेलुका 12:25 बजे
वाह! महान लेख को लागी धन्यवाद। हामीसँग ग्रोलाई माया गर्ने केही उत्कृष्ट मार्केटिङ कम्पनीहरू छन्। हामी चासो राख्ने जो कोहीलाई द्रुत डेमो देखाउन चाहन्छौं। http://www.grow.com/bi-demo/